I-Hardware Wallet | Klever Ezezimali
Ukuphepha kwakho kwe-crypto ku-a Klever Indlela
Klever I-Hardware Wallet ikuvumela ukuthi ugcine ngokuphephile, uthenge, ushintshisane, futhi ukhulise amafa akho e-crypto.
IMALI ETHENGISWA NGAYO
Klever Uhlelo lokusebenza lwe-Wallet
Kufinyeleleka kuphela ngendlela evikelekile, esebenziseka kalula, futhi egunyaziwe Klever Uxhumano oluyimfihlo lohlelo lokusebenza lwe-Wallet.
Vikela futhi Ngokushesha
Isekethe edidiyelwe yezinga eliphezulu iphethe ukhiye oyimfihlo oyingqayizivele ukuze wenze imisebenzi ye-cryptographic.
Dinga usizo? Klever inesevisi yamakhasimende ehamba phambili kuwo wonke umhlaba we-crypto.
Bamba futhi Uphathe Izimpahla Zedijithali Ngokuphepha
Isikhwama semali esiphelele nesisebenziseka kalula ukuze ugcine futhi ulawule ama-cryptocurrencies ayintandokazi endaweni yokugcina ebandayo.
Gcina, Phatha, futhi Uhwebe ngezimali zakho zedijithali zesitoreji esibandayo ngoxhumano oluvikelekile lwe-Bluetooth noma lwe-USBC ngaphakathi kohlelo lokusebenza!
Emizuzwini embalwa nje, iwalethi yakho yehadiwe isilungele ukusetshenziswa.
*Ama-blockchain angenamkhawulo nomthamo omkhulu.
Ukuphepha okuqinisekisiwe kwe-CC-EAL5+
Ukhiye wakho oyimfihlo uvikelekile kuzingxenyekazi zekhompuyutha eziqinisekisiwe.
Ukhiye oyimfihlo ongaxhunyiwe ku-inthanethi
Xhuma ukhiye wakho oyimfihlo kuphela lapho kudingeka.
Ukusebenzisa isixhumi se-USB Type-C, Klever I-Hardware Wallet ixhuma ku Klever I-Wallet futhi ikuvumela ukuthi uqinisekise ukuthengiselana kwe-crypto ngokuchofoza inkinobho.
Ukuxhumana kwe-Bluetooth 5.2
The Klever I-Hardware Wallet ingabhangqwa ngokuphephile ne Klever Uhlelo lokusebenza lwe-Wallet lisebenzisa i-Bluetooth 5.2.
Imaphi ama-blockchain asekelwayo njengamanje?
Wonke ama-blockchains atholakala ku- Klever I-Wallet 4 izosebenzisana nayo Klever I-Hardware Wallet
Idume Ngama-Cryptocurrencies Ngaphezulu kwe-10,000+ namathokheni
UMNIKELO NGAPHAMBI KOKUDAYISWA
Ukuthengisa kwangaphambili sekuphelile
Uma ugcwalise ifomu lokudayiswa ngaphambilini, sicela ulinde ukuthi sixhumane nawe maduze ukuze uqedele ukuthenga kwakho.